Xasan Sheekh Maxamuud: “Doorashada waa in la qabtaa si uu dalka u yeesho hoggaamiye”. | Dayniile.com
Home Warkii Xasan Sheekh Maxamuud: “Doorashada waa in la qabtaa si uu dalka u...
Xasan Sheekh Maxamuud: “Doorashada waa in la qabtaa si uu dalka u yeesho hoggaamiye”.
Madaxweynihii hore ee Soomaalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la dardargeliyo qabsoomidda Doorashada Dalka oo ka dib dhacday waqtiga loo ballamay in ay ku qabsoomto, waxa uu bogaadiyay in dedaallada socda.
Xasan ayaa sheegay in kursiga uu hanayo qofkii mudan hoggaaminta Dalka, waxa uu madaxda Muddo xileedkoodu ka dhammaaday ugu baaqay in ay ku dhiiradaan qabashada Doorashada haddii ay markale ku guuleystaan lagu taageerayo.
Madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka Madaxweynaha haddii uu ku guuleysto diyaar u yahay u adeegidda Shacabka haddi laga guuleysatana uu garab taagan yahay madaxweynaha la doorto sida uu hadalka u dhigay.
“Dalka waxaa lagu heshiiyay in afartii sanno mar doorasho dhacdo, Kursiga Madaxweynaha waa mid kawada dhaxeeya guud ahaan Soomaalida, balse ma aha in uu qof iska joogo, islama qaadan in uu qof iska fadhiyo meesha” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Waa uu sii hadlay Madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu soo jeediyay in la muujiyo isku kalsoonaan si meesha looga saaro daaha doorashada ku yimid sida uu hadalka u dhigay.
“8-dii Febaraayo 2017-kii waxa aan Madaxtooyada kasoo kacay aniga oo ah Madaxweyne balse habeenkii waxa aan laabtay aniga oo aan ahayn Madaxweyne, ma aha in la isku dhajiyo, ilaalinta qawaaniinta ayaa muhiim ah” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous articleWeerar lagu dhaawacay Soomaali oo ka dhacay Mareykanka
Next articleDowladda Gareece oo Turkiga dib ugu soo celisay tahriibayaal Soomaali ah
Garcinia cambogia is marketed primarily as a natural weight loss method with little or no effort. Some companies claim that supplements can help people...
Soomaaliya oo ka Qayb gashay Shirka Midowga Afrika ee ka soconaya...
Qaybtii 3aad :- Xusuustayda Waxqbadkii Xassan Cali Khayre intii aan Joogay...